पृथ्वीनारायण शाह यसकारण मनमा गढे « Janata Samachar
पृथ्वीनारायण शाह यसकारण मनमा गढे
प्रकाशित मिति : 11 January, 2019 11:48 am
पञ्चायतमा जन्मिएँ । तर व्यवस्थाको रुपमा खासै अनुभव नपाउँदै त्यो ढल्यो । राजासहितको बहुदलीय व्यवस्थामा हुर्किएँ । व्यवस्थाको रुपमा त्यसको भोग गरियो । फेरि दलविहीन जस्तै चरित्रको राजाको मात्र व्यवस्थाको पनि अनुभन गरियो । राजा नै नभएको व्यवस्थाको पनि अनुभव भयो । विद्यालयमा इतिहासको विद्यार्थी, उच्चशिक्षामा राजनीति शास्त्रको पनि विद्यार्थी भएकाले इतिहास र राजनीतिप्रति जिज्ञासा, उत्सुकता औ कुतूहलता स्वभाविक भइहाल्यो ।
त्यही कुतूहलताको उपचार खोज्दै जाँदा के स्वीकार गरियो भने अरु राजा त त्यस्तै हुन् तर पृथ्वीनारायण राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन् । त्यहीकारण पृथ्वीनारायण मन पर्यो ।
सन् १७६६ (विस १८२३) मा यदि कप्तान किनलक नेतृत्वको अंग्रेज सैनिक सिन्धुलीगढीमा कील्ला बाँधेर बसेका वीरभद्र पाण्डे र वंशु गुरुंगको मोर्चा पराजित गर्दै जयप्रकाश मल्लको गद्दी सुरक्षार्थ काठमाण्डौ आइपुगेको भए के हुन्थ्यो ?
निःसन्देह ढिलो चाँडो इष्ट इण्डिया कम्पनीले अरु भारतीय राज्यहरुलाई जस्तै दवाव र प्रभावमा राखेर एउटा सहायक सन्धीमा हस्ताक्षर गराउँँथ्यो । त्यस्तो सहायक सन्धीको मस्यौदा कस्तो हुन्थ्यो ? यस्तो हुन्थ्यो;
क. नेपालका राजाको बिदेशी सम्बन्ध कम्पनीको अधीनमा हुनेछ ।
ख.नेपालका राजा आफैंले कुनै युद्ध गर्नेछैनन् र अरु राज्यसँगको सम्बन्ध कम्पनीको परामर्शमा हुनेछ ।
ग. राज्यको राजधानीमा कम्पनीको आवाशीय प्रतिनिधि राखिनेछ ।
घ. कम्पनीको अनुमतिविना कुनै राजाले कोही विदेशीसँग सल्लाह र परामर्श गर्न पाउने छैन । राज्यको सुरक्षाको जिम्मा कम्पनीले लिनेछ । आदिआदि ।
तर यो हुन पाएन ।‘दक्षीणको बादशाह चतुर छ’ भन्ने बुझेका पृथ्वीनारायणले पहिल्यै किल्ला बाँधे र वंशराज र वीरभद्रको सेनाले पौवागढीमै अंग्रेज सेनालाई धुलो चटाइदियो । आधुनिक अखण्ड नेपालको अभियान मूर्तिकृत हुन बाटो खोल्ने यो ठूलो कडी बन्यो ।
यसैले पृथ्वीनारायण शाह मन पर्छ ।
सज्जनहरु इतिहास केलाउन भन्दा नंग्याउन अभिषप्त छन् । नेपाल कहिल्यै सिंगो थिएन र छैन भन्ने स्थायी कोणबाट तिनीहरुले गर्ने सस्ता र बिकाउ टिप्पणी एकाध दिन बिक्नु र हराउनु आकस्मिकता होइन । पोखराको साहित्य उत्सव हुन् या शहरका तामसी भोज, यस्ता कुरा आइरहन्छन् । सिके लालहरु धार्नी र विसौलीमा नाक र कान जोख्न व्यस्त भएको बेला दूलामा बसेर वीष सञ्चय गर्ने हरिया साँपहरु ऐनमौकामा मैदान निस्कने र डसेर हिंड्ने अभ्यास उस्तै छ । अस्ती जस्तै । हिजो जस्तै ।
पुष २७ ।खासमा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झने दिन । राजाका पनि राजा भएकाले बडामहाराज भनियो होला, कुरै सकियो । एकता दिवस मान्नु वा नमान्नु वा सार्वजनिक बिदा हुनु र नहुनु पनि अलग कुरा । योगी नरहरीनाथले एउटा असल परम्पराको पहलकदमी लिएकोमा उनलाई पनि नमन ।
तर पृथ्वीनारायण शाह नेपालको इतिहासका एक श्रेष्ठ पात्र, विशाल र अखण्ड नेपालको स्वप्नद्रष्टा नै हुन् । तात्कालीन गणराज्यको रुपमा रहेका बाइसी चौबीसीलाई एउटै मालामा उनेर सिंगो नेपाल निर्माण अभियानका बलशाली अभियन्ता । त्यो एकीकरण भुगोलको कि भावनाको ?, जातको कि संस्कृतिको ? राजाको कि रजौटाको ? गोरखाको कि कान्तिपुरको ? यस्ता प्रश्न तात्कालीन यथार्थबाट निरपेक्ष बसेर बुद्धि खियाउने तामस बुद्धिजीवीबाट धेरै आउँछ । यसैले केही सवाल उपयुक्त हुन्छ ।
पर्सियन वा इरानीहरुको खेती राजा साइरसलाई गाली गर्नमा सीमित छ ? यूनानी वा ग्रीकहरुले सिकन्दरको गौरवगाथा गाउँछन् वा उछितो काड्छन् ? भारतमा चन्द्रगुप्त मौर्यको सौर्यको निन्दा गरिन्छ ? अखण्ड भारतका अर्का युगपुरुष अशोकको मानमर्दन गर्दा बुद्धिजीवीहरुको हैसियत र प्रतिष्ठाको अनुहार ऐनामा कस्तो देखिएला ? अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम वा क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने सप्तऋषी (हेमिल्टन, जोन एडम्स, फ्रेंकलिन, जोन जे, जेफर्सन, म्याडिसन, जर्ज वाशिंगटन) को खोइरो खनेर ठूला बन्न खोज्नेको हविगत के होला ? रोमन साम्राज्यको अधीनबाट निस्किएर बेलायतलाई अधिराज्य बनाउने राजा जेम्स र चाल्र्स प्रथमलाई बेलायतीहरुले कसरी बुझ्छन् ?
पृथ्वीनारायणकालीन जापानी साम्राज्यका नायक अकिहितो र तोशिकोको निन्दा गर्दा कती हाँस्दा हुन् जापानी ? साम्राज्यको रुपमा जर्मनीको नेतृत्व गर्ने विश्मार्कलाई जर्मन बुद्धिजीवीहरुले पनि नेपालका स्वनामघोषित बुद्धिजीवीले जस्तै कौडीको तहमा राखेर व्याख्या गर्लान् ? अथवा, पूर्व र पश्चिम बाँड्ने बर्लिन पर्खाल ढलेपछिको एकीकृत जर्मनीको नेतृत्व गर्ने हेल्मुट कोल पनि बुद्धिको कोपभाजनमा कति पर्लान् ?
प्रश्न सिधा छ । तात्कालीन विश्व परिस्थति र छिमेकी देशको समेत अवस्थालाई वेवास्था गरेर नेपाल निर्माण महाअभियानको नेतृत्व गर्नु गलत हो ? घर बलियो बनाएर पराईसँग लड्ने सामथ्र्य विस्तार गर्नु अपराध हो ? ३ लाख ३४ हजार बर्गकिलोमिटरको क्षेत्रफलको नेपाल निर्माणको जग हाल्नु सामान्य हो ? यूनानी, मंगोल, इरानी, पोर्चुगीज, फ्रान्सेली, मुगल र अंग्रेज (इष्ट इण्डिया) को पञ्जामा छटपटाइरहेको भारतको दशाबाट अलग राखेर स्वाधीन, अक्षुण र संगठित नेपाल निर्माण गर्नु नाजायज हो ?
सीमान्तकृत समुदायको आवाज बोल्ने दावी गर्ने लेखकले पृथ्वीनारायण शाहलाई लगाउने झल्लु आरोपको प्रतिकार गर्न कोही खस, कोही ब्राम्हण हुनपर्दैन । कोही आर्य र मंगोल, कोही पहाडी कोही मधेसी पनि हुनपर्दैन । विश्व मानचित्र हेरेर सदाबहार स्वाधीन नेपाली भइदिए पुग्छ । नेपाल एकीकरणको नेतृत्व मात्र पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन्, तरबार र खुँडा चलाउने किराँत र थारु, मगर र तामाङको भागमा पनि विजयको श्री जान्छ भनेर बुझिदिए पुग्छ ।
पृष्ठभूमीको बलशाली नेपालको दृष्टान्त नहेरी आरोप र आलोचनाको प्रायोजित खेती बन्द गरौं । कुनैबेला जसरी तीब्बतले नेपाललाई वार्षिक कर तिर्नपर्दथ्यो त्यसरी नै तात्कालीन भारतले अफगानीलाई वार्षिक कर तिर्नपर्दथ्यो । मेरठमा बाजीरावको हिन्दूपाद पादशाही अभियान उत्कर्षमा पुग्दा गोरखाका राजा भएका पृथ्वीनारायण शाहले राज्य बचाउने हेतु सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको राज्यविस्तार अभियान नै आजको नेपालको यथार्थ हो भनेर बिर्सन हुँदैन ।
व्यापारका लागि अनुमति दिएर राखिएका युरोपियनले आखिरमा कसरी हैदराबाद चकनाचूर बनाए भन्ने कुरा आधुनिक भारतको मुगल शासनको पतनको अध्यायबाट थाहा हुन्छ । केरलामा डच, मैसुरमा फ्रेञ्च, बंगालमा यूरोपीय व्यापारीको छल र कपटको खबर महिना दिनमा नै आइपुग्थ्यो भने दक्षिणबाट सावधान रहन तिनले अपनाएको तकनिकीलाई जातको घानमा हाल्नु ? यो वेवकुफी हो ।
बजारमा प्रो–माक्र्सवादी, प्रो–प्रगतिशील, प्रो–जनजातीका अगुवा प्रशस्त छन् ।खबरदारी यिनीहरुलाई गर्नपर्छ भन्ने हो । जुनबेला पृथ्वीनारायण शाह एकीकरण दौडमा थिए त्यो बेला अंग्रेजले भारतको मद्रास (१७४८), कलकत्ता (१७५७), बंगाल (१७५८) हत्यायो । गंगा नदीतटको प्लासीको युद्धबाट औपचारिक रुपमा भारत अंग्रेजको दास युगमा प्रवेश गर्यो । र, १७७० मा फ्रेन्च इष्ट इडिया लखेटिएपछि एकछत्र साम्राज्य चलायो । पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर र त्यसपछि कीर्तिपुर विजय गरेको समय हो यो । यहीबेला जयप्रकाश मल्लले गोरखाली सेनाको आक्रमणको प्रतिरोध गर्न मगाएको अंग्रेज सेना सिन्धुलीगढीमै सोत्तर भएर नफर्किएको भए नेपालको इतिहासको अर्को अँध्यारो पाटोको सम्भावना पनि त उत्तिकै छ । यहींनेर, पृथ्वीनारायणकै दूरदर्शिता र रणनीतिक चातुर्यले नेपाल खाल्डो बिदेशीको प्रभाव र चंगुलमा पर्नबाट बच्यो । बस् यत्ति हो ।
फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति हुनुभन्दा चौध वर्ष अगाडि नै पृथ्वीनारायण शाहको निधन भयो । खण्डीकरणबाट एकीकरणको बाटोमा लागेर उनले गल्ती गरेनन् बरु बाह्य साम्राज्यसँग मुकाबिला गर्नसक्ने अखण्ड राष्ट्रको आधार बनाए । विखण्डित र अव्यवस्थित राष्ट्रिय शासन व्यवस्थालाई एकतामा बाँध्न सजिलो बनाए । बाइसेचौबिसे कज्याएर राष्ट्र बनाउने अभियान थाल्नु बन्दकोठामा बसेर इतिहासका नायकविरुद्ध वीषवमन गर्र्नुजस्तो सहज नहोला ।
राज्यसत्तामा जहाँकहीं कूलीन, सामन्त र धार्मिक अभिजात बर्गकै हालीमुहाली हुने हो । हिजो पनि आज पनि । फ्रान्समा पनि, नेपालमा पनि, बेलायतमा पनि, अमेरिकामा पनि । तर राजनीतिको, संस्कृतिको, जातीको, भाषाको डिस्कोर्सभित्र पसेर पृथ्वीनारायणको खेदो खन्नुको अर्थ पाँच सय पचास वर्षको मल्लकाल र त्यो भन्दा अगाडिको लिच्छवी युगसम्मलाई चाँहि बेपर्वाह वेवास्ता गर्नु हो । अथवा, सामाजिक जागरणको अवधिमा पनि तात्कालीन मुद्दाको उठान र विकासमा देखिएका कमजोरी र त्रुटीलाई ढाकछोप गर्नु हो । तर तुक र अर्थ दुबै नभए पनि चुल्हो बाल्न र जगाउनै पृथ्वीनारायणको विरोध र आलोचना गर्ने संगठित समूह र गिरोहको खेती नै हो । यसैले प्रगतिशील र क्रान्तिकारी दावी गर्नेभित्र पनि यस्ता अवाञ्छित गिरोह छन् जो राजनीतिको रोटी सेक्न इतिहासको हुर्मत लिने ध्याउन्नमा निरन्तर छन् ।
संयोग, फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्यू र पृथ्वीनारायण शाहको निधन एउटै वर्ष भएछ । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा मन्टेस्क्यूले भनेजस्तो शक्ति पृथकीकरण भएन भनेर बहस गर्नु कति बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ ? तीन सय वर्षअघिको समयलाई आजमा तुलना गरेर कानुनको आत्माअनुसारको व्यवस्था नगरेकाले शाह आततायी हुन् भन्नु ? यही हो सोचको गरिबी र ज्ञानको ठगी भनेको ।
पृथ्वीनारायण शाहभन्दा दश वर्ष अगाडि जन्मेका रहेछन् जीन ज्याक रुसो । रुसोले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त यस्तो थियो, नेपालमा चाँहि एकीकरणको नाममा यस्तो भयो भन्ने अक्षरजीवी पनि देखिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ऐच्छिक अंग्रेजी पढ्दैमा वा पढाउँदैमा त्यो बर्ग आफूलाई दुनियाँको सर्वज्ञ ठान्दछ र पृथ्वीनारायणलाई चुत्थो करार गर्न हाडछाला घोटेर मरिहत्ते गर्दछ । अझ गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने, त्यसमाथि पनि अधिकारकर्मीको छाला ओडेका, त्यसमाथि पनि आफूलाई जनजातिको नाइके दावी गर्ने मुठ्ठीभरका बिचौलियाको त कुरै बेग्लै । त्यस्ता पण्डितहरु फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिभन्दा अघिको फ्रान्स पनि हेर्दैनन्, पृथ्वीनारायणकालीन नेपालको समाज र भारतीय उपमहाद्वीपमा बढ्दो पश्चिमा हैकमको अन्दाज पनि गर्दैनन् ।
अमेरिकाले वेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुन स्वतन्त्रता संघर्ष शुरु गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले सार्वभौम राष्ट्र एकीकरणको गतिगतिशील बनाएको मूल्याङ्कन हुनपर्दैन ? प्रायोजित पण्डितहरुलाई कीर्तिपुरमा नाक काटेको र भक्तपुरमा चाक ताछेको हिसाब गर्दैमा फुर्सद छैन । पृथ्वीनारायणको सेखी झार्न पाउँदा जात र गोत्र प्राप्त हुन्छ भन्ने ठान्ने बग्रेल्ती छन् ।कतिलाई त पृथ्वीनारायणको एकीकरणलाई गलत करार गर्न पाए बढो क्रान्तिकारी देखिने औ भइने भ्रम पनि छ । अनि पौने तीन सय वर्षअघिको एकीकरण तिनलाई बहूत सामन्तवादी जँच्छ । अनि शुरु हुन्छ यिनका द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका तामसी व्याख्या । अनि तिनले कहिल्यै अनुमान लगाएनन् पृथ्वीनारायण माक्र्सभन्दा झण्डै सय वर्ष जेठा थिए र नेपालमा एकीकत राज्यको अवधारणा स्थापित भएको सय वर्षपछि मात्र दास क्यापिटल छापिएको कुरा । तिनका साम्यवादी आदर्शको घोषणापत्र आउँदा विशाल नेपालको क्षेत्रफल तीन लाख बर्गकिलोमिटर पुगेको थियो भन्न तिनलाई लाज लाग्छ ।
लाल र श्वेतहरुको चश्मामा अजीब रङ्ग छ । तिनलाई क्रान्तिका नाममा भएका सबै रक्तपात जँच्छ । परिवर्तनका नाममा भएका कत्लेआम पनि जँच्छ । विद्रोहका नाममा भएका नरसंहारले तिनलाई पोल्दैन । जसै तात्कालीन समाज र विश्व परिस्थतिअनुसार राजा राजाबीचको लडाईं, राज्य राज्यबीचको युद्धको कुरा आउँछ अनि तिनको छाती पोल्छ । दुनियामा गणराज्य र कबिलालाई एउटा नायकको नेतृत्वमा एकीकृत गर्ने कुनचाँहि युद्धमा रगत बगेको छैन ? कुनचाँहि युद्धमा शत्रुको टाउको भेदन भएको छैन ? अरुले गरेको युद्ध चाँहि क्रान्तिकारी संघर्ष, पृथ्वीनारायण शाहले गरेको चाँहि रक्तपात?शाहवंशको राजा भएकाले चाँहि बेठीक ?
यही हो सोचको दरिद्रता भनेको । त्यो पनि तात्कालीन इतिहासको स्वभाविक गति हो भनेर स्वीकार्दा तिनलाई ग्लानी महशुस हुन्छ । टुक्राटुक्रा राज्य जोडेर राष्ट्र बनाउने उनको अभियान अरु देशमा जस्तै युद्धमै आधारित हुनु नाजायज हैन भन्दा तलब आउँदैन ?अनि फेरि राष्ट्रवादको वान्ता गर्ने पनि तिनै छन् बजारमा । स्वाधीनता र सार्वभौमताको पखाला पनि तिनलाई बढी चल्छ । जातको अचार र धर्मको शितन हात पारेपछि तिनलाई के पृथ्वीनारायण, के बहादुर शाह !इतिहासको अस्तीत्व स्वीकार गर्न पहिला आफूमाथि गर्व गरौं । राष्ट्रनिर्माताको रुपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई स्वीकार गर्न हृदय खोलौं ।
उसले भन्यो, ‘ए बाबु, नेकपा’ म त ‘मरेँ लाज’ले !
पढ्न झर्को नमान्नुहोला, उत्तर दिने त हाम्रो पार्टीमा चलन नै छैन । तपाईंले पनि उत्तर
भ्रष्टाचार, बेथिति र कुसंस्कार ! राज्यविरुद्धको महाअपराध
पुरुषोत्तम पौडेल भ्रष्टाचार हाम्रो देश डुबाउने एउटा डरलाग्दो रोग हो । भ्रष्टाचारमाथि सबैतिरबाट आक्रमण जरूरी
वामपन्थी सरकारको जनमुखी बजेटः कार्यान्वयनमा चुनौती
प्रेमलकुमार खनाल वामपन्थीको नेतृत्वमा बनेको बर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. युबराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७
वामदेवः बारुद तर बन्दुकविनाको !
अब फेरि कुन अदृश्य शक्ति कम्युनिष्ट केन्द्रमा एन्टिभाइरस बनिरहेको छ, यसको सपाट जवाफ वामदेव या
पत्रकार महासंघले दिउँसै लालटिन बाल्ने
मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध आन्दोनरत नेपाल पत्रकार महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
महोत्तरी–धनुषा जोड्ने पुलमा ५० भ्वाङ
पुल असोजदेखि प्रयोग गरिएको थियो । सवारी आगन शुरु भएको केही महिनामै कालोपत्र उप्केर ठूल्ठूला भ्वाङ परेको हो ।
उपसचिवले गरे १२ कक्षामा पढ्ने छोरी…
सरकारको उच्चपदस्थ कर्मचारीले यतिसम्मको हर्कत गर्लान् भनेर पत्याउन जो कोहीलाई गाह्रो हुन्छ ।
लोकसेवा सम्बन्धी निर्णयले सकारात्मक नजीर बसाल्छ
उसले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार काम गर्दै जाने, मन्त्रालयले माग गर्ने र कर्मचारी भर्ना हुने नियमित कार्य त होला तर यो…
एक बोरा आलु र कम्युनिष्ट चरित्र
‘जनताबाट सिक्नु अनि जनतालाई सिकाउनु’ अशल कम्युनिस्टको चरित्र नै हो
लोकसेवा : ९१६१ पदपूर्ति अनिश्चित
काठमाडौं । राजधानीबाट मंगलबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदिय समितिले गरेको निर्देशनलाई प्राथमिकतामा राखेर समाचार प्रकाशित…
शौचालयको छानो भत्किँदा ४ बालबालिकाको मृत्यु
अमिताभ बच्चनपछि अर्का सेलिब्रेटीको ट्वीटर ह्याक, प्रोफाइलमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री
जनरल इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ बैंकबीच बीमा सम्झौता
ग्लोबल आइएमई बैंक र सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स बीच सम्झौता
ट्वीन्स गर्लको गीत सुटिङमा आगो लाग्यो, सुटिङमा भाँडियाे (भिडियो)